Search Engine nokwenza
Esimweni lapho website yakho siqu ngeke babe isakhiwo yokwandisa isikhundla salo imiphumela imibuzo thematic izinjini kuyoba kakhulu kusuka phezulu. Ochwepheshe kuphela bayakwazi nokwandisa kusayithi lakho ukuze bagcine izikhundla okusezingeni eliphezulu njalo, ngaphandle ebuka kimi abacwaningi amamojuli.
Lapho ucabanga ukuthi ukuze kuqinisekiswe ukuthi isayithi kwenza imali, umane abanamathela isihloko langempela, kuba iphutha ngokujulile. Khona-ke, lapho ukuphila kwakho ngeke ngumnikazi isakhiwo kanye nokwenza kahle endaweni yayo imiphumela imibuzo thematic izinjini kuyoba kude endaweni yokuqala, futhi ngisho ngubani kungazelelwe kwehla abasebenzisi Inthanethi maduze ukubaleka, kanjalo unezela ukuthembeka isayithi.
Kanjalo-ke, uyini nokwenza sangaphakathi iwebhusayithi? Ukuthuthukisa kwenza kube nokwenzeka ukuba uxazulule zonke imisebenzi eminingana: ukusebenza, ukusatshalaliswa, futhi, njengoba umphumela, nokwenza imali isayithi. Imigomo zokwenza imali - kuwumphumela nokwenza sokugcina. Khona-ke, lapho isakhiwo seluvele ukuma kufaneleka, ukwakha core semantic, futhi izigaba baqiniseka nezidingo ngabanye in the yelucwaningo, kukhona ithuba ukhulume nomholo phezu ingosi.
Futhi-ke, le site elungiselelwe has izindawo eziningi eziphezulu imiphumela, futhi ngenxa yalokho, inombolo osindayo izivakashi, ukukhula njalo TIC nange-PR. Ngamanye amazwi, lo nokwenza kuvumela ukuthola traffic elisemandleni isisekelo ukwenza imali ngempumelelo. Ukusebenzisa ngokugcwele injini bese inzuzo - imiqondo emibili ehlobene. Lapha, yonke imininingwane Sisho, ngakho-ke kuhle ukuphathisa lo msebenzi ochwepheshe. Ngisho sesimweni ezifana thwebula ngesivinini kuthinta ukuthembeka kwalezi zinsiza. Iqiniso ukusheshisa engosini, lokhu kuphela eyodwa lenqwaba izici ukukhuthazwa, uma ixhunywe ku amandla olulodwa eliphelele igalelo elihle le nqubo, sithola ububanzi imodeli ekwenzeni imali.
Yiqiniso, ungafunda izincwadi ezimbalwa futhi ukuthatha yena ngoba le nto, kodwa Cubs engozini enkulu ukuvimbela imithombo yalo. nokwenza okungafanele kungaholela yokuthi portal kuzoba izihlungi, bese ukuze alungise leso simo kuyoba yinkinga kakhulu. Kukhona ebaluleke ngokucacile ukuqonda ukuthi abanye ulwazi theory incane, ngoba ngokushesha zibuye ziphelelwe isikhathi yelwati emhlabeni, futhi ngenxa yokuthi izolo yayifike ngesikhathi, futhi manje akekho unesithakazelo.
ochwepheshe kuphela bayakwazi nokwandisa ingosi ngakho, ukuze bagcine izikhundla okusezingeni eliphezulu njalo, ngaphandle kokubuka ekushintsheni search algorithm. Ukutshala nokwenza kahle namuhla, ngokusho kwakhe ekugcineni akwazi ukuthola okuningi.